आहा! मेरो खप्तड यात्रा :: Setopati
आहा! मेरो खप्तड यात्रा
खप्तड जाने योजना एक वर्षअघि बनेको थियो। तर कोभिड-१९ का कारण त्यतिबेला रोकिए पनि गएको महिना सफल भएरै छोड्यो।
नयाँ वानेश्वरस्थित नेपाल केक एण्ड बेकमा सधैंजसो कफी खान जम्मा हुँदा वाईल्ड वेष्ट नेपालका परिकल्पनाकार अमर शाही तथा साथीहरूले खप्तडका बारेमा कुरा गरिरहनु हुन्थ्यो। खप्तडको कुरा सुन्दा-सुन्दा कहिले जान पाईएला जस्तो लागिरहन्थ्यो।
नभन्दै खप्तड जाने योजना बन्यो। अमर दाइले मेरो हातमा खप्तड भ्रमण तालिका थमाउनासाथ मैले भने, ‘खप्तडमा दुई दिन त बस्नुपर्छ है दाजु।’ तर म गलत रहेछु। जब खप्तड पुगेँ अनि मात्र थाहा भयो खप्तड क्षेत्र घुम्न दुई दिन होईन कम्तिमा चार दिन समय छुट्याउनुपर्ने रहेछ।
पेशाले म व्यवसायी, व्यवसायका कारण सधैंजसो दौडधुप भईरहने। जति दौडिए पनि कहिल्यै काम नसकिने। अनि जबजब थकान हुन्छ कहीँ कतै घुम्न जाँउ भन्ने लागिरहन्छ।
समयले साथ दियो कि म साथीभाइसँग घुम्न निस्कन्छु। एकातिर कोरोनाले ब्यवसाय चपट भइरहेको थियो भने अर्कोतिर बाहिर कतै घुम्न नगएको लामो समय भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा मनका सबै तनाव हटाएर शारीरिक स्वास्थ्यलाई ताजा बनाउन मलाई खप्तड यात्राले ठूलो सहयोग गर्‍यो।
जनकराज भारतीको नेतृत्वमा भरतबन्धु थापा, जगनाथ गिरी, मोहनपूर्ण सत्याल, दिपक अर्याल, सुमन पोखरेल, सम्पूर्ण श्रेष्ठ, अनुप घिमीरे, कृष्ण तिमल्सिना, नारायण ज्याख्व, हेमन्त विवस र म यात्रामा सहभागी थियौं।
यात्रा सुरू गर्ने अघिल्लो रातभर निद्रा लागेन। कहिले बिहान होला भन्ने मनमा लागिरह्यो। भोलिपल्ट बिहान तोकिएको ठाउँमा सबैभन्दा अगाडि मै पुगेँ।
बिहान ८: १५ बजे काठमाडौंबाट जहाज चढेको हामी एक घन्टामा धनगढी पुग्यौं। जहाजबाट देखिएको सुन्दर हिमालको दृश्यले धनगढी पुगेको पत्तै भएन।
त्यसपछि धनगढीमा दुई घन्टा कुरेपछि दिपाएल पुग्यौं। धनगढीदेखि पहाडतर्फ जान जहाज त्यति धेरै नभएकाले पालै पालो उडान हुनेरहेछ।
धनगढीदेखि दिपाएलसम्म करिब २० मिनेटको यात्रामा तराईको फाँटदेखि ठूला ठूला पहाडको अवलोकन गर्‍यौं।
विमानस्थलमा हामीलाई लिन भनेर गाडी आईसकेको थियो। त्यसपछि दिपायलको रिभरसाईड होटलमा बिहानीका खाना खाएर झिंग्रानातिर अगाडि बढ्यौं। त्यसअघि हामीले डोटीको शिलगढीस्थित शैलेश्वरी मन्दिरको दर्शन गर्‍यौं।
शैलेश्वरी मन्दिरको दर्शन गरेर हामी झिग्रना पुग्दा करिब साँझको पाँच बजिसकेको थियो।
यात्राको पहिलो हामीमा दिन केही थकान र केही उत्साह थियो।
यात्राको दोस्रो दिन झिंग्राना होमस्टेमा चिया/नास्ता गरेर बिहान सबेरै अगाडि बढ्यौं। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वारमा नेपाली सेनाको चेकपोष्ट कटे अगाडि बढ्दा साथीहरू निकै हौसिएका थिए। पाँच घण्टाको ठाडो उकालो भए पनि साथीभाइको रमाइलो र नाच्दै गाउँदै हासिमजाकमै बिचपानी पुगेको पत्तै भएन।
बिहान करिब ११ बजे बिचपानी पुगेको हाम्रा लागि खाना तयार भइसकेको थियो। केही समय आरम गरेर अगाडि बढ्यौं। करिब ५ घण्टाको घनाजंगल यात्रा पश्चात हामी खप्तडको पाटन पुग्यौं। जहाँ हाम्रा लागि टेन्ट टाँगेर बासको बन्दोबस्त मिलाइएको रहेछ।
खप्तड क्षेत्र घुम्न आउनेका लागि सामान्य खाना र बास बस्न होटल छन्। तर हामीले यसको सबै चाँजो पाँचो आफैंले मिलाएका थियौं। दिनभरिको हिँडाले थाकेका हामी खाना खाएर केहीबेर गफिएपछि सुत्यौं।
यात्राको तेस्रो दिन सैंपाल हिमालमा सूर्योदय हेर्न हामी बिहान ५ बजे नै उठेर घोडादाउनेतर्फ अगाडि बढ्यौं। घोडादाउने फाँट खप्तड क्षेत्रको ठूलो फाँटमध्येको एक हो।
सूर्योदयको दृश्यावलोकन गरेर हामी खप्तड दह अवलोकन गर्न गयौं। घोडादाउने फाँटबाट खप्तडदह पुग्न एक घण्टा लाग्दोरहेछ। खप्तड दह अवलोकनपछि खाना खाएर खप्तड बाबा आश्रम पुग्यौं। बेलुका फर्किएर टेण्टमा बास बस्यौं।
यात्राको चौथो दिन त्रिवेणी मन्दिर दर्शन गर्‍यौं। त्रिवेणी मन्दिर खप्तड क्षेत्रको प्रमुख आकर्षण मध्येको एक हो। यो मन्दिरमा आफूले चिताएको पुरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ।
खप्तडको एक खण्ड पनि नघुमेमा हामी अघाउन्जेल घुम्न पाएनौं। अब हामी खप्तडबाट फर्कने तरखरमा लाग्यौं।
जादा ११ घण्टा लागेको हामी फर्कदा आठ घण्टामै झिग्रना पुग्यौं। झिग्रनाबाट गाडी चढेर दिपायलस्थित रिभरसाईड होटल पुग्यौं।
यात्राको पाँचौ दिन डोटीको शालमुनी, भागेश्वर मन्दिरको दर्शन गरि नास्ता खाएर शुक्लाफाँटातर्फ अगाडि बढ्यौं। दिपालयदेखि धनगढीसम्म जहाज र धनगढीदेखि शुक्लाफाँटासम्म जिपमा गयौं।
शुक्लाफाँटा कटेजमा समयमै पुगेका हामी सूर्यस्त हेर्न नेपालकै सबैभन्दा लामो लामो झोलुंगे पुल गयौं। झोलुंगे पुलसँगै सूर्य अस्ताएको दृश्य हेरेर हामी बास बस्ने स्थान शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जसँगै जोडिएको शुक्लाफाँटा जंगल कटेज फर्कियौं।
यात्राको छैठौं दिन हामी बिहान शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जमा जिप सफारी गर्‍यौं। त्यसपछि खाना खाएर धनगढीतर्फ अगाडि बढ्यौं।
वेद उप्रेतीको म्युजीयम अवलोकन गर्दै हामी धनगढी फर्कियौं। त्यसपछि केहीबेर धनगढी बजार डुलेर केही किनमेल गर्‍यौं। साँझको ७ बजे जहाज चढेर काठमाडौं फर्कियौं।
सामान्यतया वर्षमा एक दुई पटक लामो यात्रा गर्ने मैले पहिलो पटक भ्रमण तालिका बनाएरै घुम्न गएँ। मेरो लागि निकै अविस्मिरणीय रहेको यो यात्राको चाँजोपाँजो रैका टुर्स एण्ड ट्राभल्सका दाजु अमर दाइले मिलाउनु भएको हो।
लामो समयसम्म थला परेको पर्यटनका लागि ‘वेल्ड–वेस्टका चर्चित पर्यटकीय स्थानहरू– रारा, खप्तड, शुक्लाफाँटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘टुर प्याकेज’ ल्याएको छ।
प्रवद्र्धकका अनुसार सुलभ, सस्तो र स्तरीय सेवा उपलब्ध छन्। उक्त टुरको व्यवस्थापन बुद्ध एयर, बुद्ध होलिडेज र रैंका टुर्स एण्ड ट्रेक्सले गरेका हुन्।
वेल्ड–वेस्टका चर्चित पर्यटकीय स्थानहरुको भ्रमण गराउने हेतुले थलिएको प्रारम्भिक यात्रा हो– खप्तड–शुक्लाफाँटा टुर।
शाहीका अनुसारयो टुर प्याकेजको सुरुवात ३९ हजार ९ सय ९९ रुपैया छ। तर यात्रुको सेवा र सुविधा अनुसार प्याकेज दर फरक पर्न जानसक्छ।
खप्तड यात्राको लागि यो प्याकेजमा जान कम्तीमा ८ जना हुनुपर्ने रैका टुर एण्ड ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक अमर शाहीले बताए।
यस्तो छ खप्तडको विशेषता
खप्तड क्षेत्रमा २२ वटा पाटन र र ५३ वटा थुम्का छन्। थुम्कालाई स्थायीले झोती भन्दा रैछन्।
खप्तड बाबाले तपस्या गरेको पवित्र ठाउँ भएकाले खप्तड प्राकृतिक दृष्टिले मात्र नभई, धार्मिक पर्यटककीय हिसाबले समेत उपर्युक्त गन्तव्यका रुपमा परिचित रहेको छ।
पौराणिक कालमा सिद्ध तथा ऋषिमुनीले तपस्या गरेको यस क्षेत्रलाई पुराणमा समेत खेचरादी पर्वतका रूपमा वर्णन गरिएको छ।
समुन्द्र सतहबाट ३ हजार मिटर उचाईमा रहेको खप्तड क्षेत्रको क्षेत्रफल २ सय २५ वर्ग किलोमिटर छ।
खप्तडमा घुम्नका लागि खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी, खप्पर दह, शिवमन्दिर, सहस्रलिंग, गणेशस्थान, नागढुंगा, केदारढुंगाजस्ता धार्मिकस्थल छन्।
तस्बिरःभरतबन्धु थापा/फोटो बैंक नेपाल डटकम
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १२, २०७७, १५:५१:००
लागुऔषध कोकिनका ग्राहक खोज्दै होटल पुगेका प्रहरी जवानसहित चार जना कारोबारी समातिए
अन्नपूर्ण आधार शिविर पदयात्रामा जाँदाको त्यो क्षण...
बेलहिलमा खुसीको गीत
त्यो अधुरो गन्तव्यमा भेटिएका खुसी